Posted on 24.08.2020, 13:51 By Goodsite
एक पटक ल्याए ब्राजील ब्राजील देखि, एक कार रेलका पुरुष (कसरी छिटो तपाईं संग प्रेम पर्नु र लिन एक महिला, बस राखे) यहाँ आउँछ मानिसको औसत ब्राजिलका महिला र सुरु गर्न उनको र उनको बताउँछ कसरी सुन्दर र अनुपम त्यो छ, र त्यो सबै भन्दा राम्रो छ, र एक धेरै सुन्दर शब्द । र अधिकांश महिला छन् उहाँलाई पछि, आगो र पानी । किनभने अन्त मा, कसैले याद, सराहना, र प्रतिक्रिया गर्न, उनको, एक रानी । र ब्रस गर्ने गरिएको छ, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भएकोले बाल्यकाल, ध्यान, प्रशंसा, र श्रद्धाको । बोसो र पुरानो, सबै तिनीहरूलाई छ । र तपाईं गुमाउन यो मानिस मा एक भीड ब्राजिलका महिला. यहाँ हरेक बारी मा, माफ गर्नुहोस्, यो के । तिनीहरूले प्रेम र आदर, प्रत्येक अन्य मोडेल मा मूर्तिकला, बेचन मा काठ को कुनै पनि आकार. अनुसार गर्न विक्रेता गर्न इच्छुक छन्, जसले विश्वास गर्छन् । त्यहाँ छ भने तपाईं को लागि एक घर बालिका, पनि, तपाईं सजिलै यो बाहिर प्रयास. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इच्छा छैन बिर्सन तर्जुमा गर्न एउटा कुरा, र त्यसपछि यो सही छ, र यो पनि आवश्यक छ कि यो जान ब्राजील. कुरा धेरै नजिक मेरो हृदय । किनभने मलाई थाहा छ यी सबै रोचक कथाहरू र म मात्र दुई महिना को अवलोकन भन्दै, के तिनीहरूले साँच्चै हो, म सोध्न भएको छ जसले लागि ब्राजील मा एक वर्ष, एक केटी आए र थाह लगभग सबै बारे ब्राजिलियन मानिसहरू, अधिकांश गीतहरू प्रेम बारे छन्, आफ्नो खोज बारे, खुसी, प्रेम र यति धेरै छैन र यसैले पनि अधिक रंगीन । जब म प्रेम मा गिर संग ब्रस, म यो बुझे किनभने, सबै गीतहरू छन् । यति भनेर तिनीहरूले थाह छ कि एक बिहान वा राम्रो पछि, मध्यरात मा एक पल्ट, तिनीहरूले देख्नेछन्, र काम सम्म आफ्नो अविश्वसनीय, तपाईं कुरा गर्न सक्छौं त सजिलै बारेमा कुराकानी अपरिचित संग भने, आफ्नो सारा जीवन मा बसोबास लबी. र बस एक गलतफहमीले, मलाई थाहा छैन अझै बारेमा महिला, सबै सरल छ — धन्यवाद ब्राजिलका महिला र क्षमता बनाउन, तिनीहरूलाई प्रत्येक हुन्छ एक ठूलो खुराक को ध्यान छ । किनभने म अक्सर देख्न सडकमा मा धेरै राम्रो, पोटिलो महिलाहरु मा तंग लेग्गीन्स संग माइक्रो भन्ने तर्क विस्तार हरेक टक्कर । र, तपाईंलाई थाहा छ, यो सुरुचिपूर्ण छ । निस्सन्देह, तपाईं प्रयोग गर्न सक्छन् सुरक्षित कारण फर्क मा मानक लग, तर यो पक्कै पनि छैन जाने । र ब्राजिलका मानिसहरू, राम्रो, तिनीहरूले जस्तै आकर्षण गर्न, र त्यहाँ भन्ने कुरा को बारे मा हरेक महिला त्यो रुचि. युरोपेली विशेषताहरु र नीलो आँखा मानिन्छ सबैभन्दा सुन्दर छ । यी सबै कुराहरू सँगै सामान्यतया कारण निष्कपट उत्साह मात्र मा पुरुष र महिला । तिनीहरूले थिएनन् लुक्ने । मेरो लागि, उदाहरणका लागि, तिनीहरूले प्रेम व्यावहारिक मजाक मा गाला को एउटा पुरानो महिला, म पनि लगभग मिल्यो प्रयोग गर्न तिनीहरूलाई, र पनि त म संग रोकियो एक चिसो वजन जब म माथि हिंडे जो कसैले रोकिराखेको थियो, मेरो हात मेरो गालामा । एक धेरै न्यानो सामान्य संस्कृति गर्न अनुमति दिन्छ कि विक्रेता कल»मेरो फूल»र अन्ततः-शैक्षिक नेताहरूले विद्यार्थी ई-मेल लेख्नुहोस्»तपाईं चाहनुहुन्छ केहि».
बारी — सबै विदेशीहरू भनेर विश्वास, र ब्रस धेरै राम्रो हो ओछ्यानमा मा. राम्रो देख, एक समय जब तिनीहरूले आकर्षित आठ जांघों मा एक नृत्य, कुनै पनि गत शङ्का गायब. मा शहर को केन्द्र, त्यहाँ एक विशाल मूर्ति भनिन्छ»जीवनको रूख»र एक अद्भुत संग्रहालय द्वारा सिर्जना नै कलाकार संग नै मूर्तिहरु. खैर, धेरै धार्मिक ब्रस हौं क्याथोलिक चर्च, सबै सुख को जीवन । तिनीहरूमध्ये, उदाहरणका लागि, परिवर्तन को पत्नी र पति । सी बताउन सक्छन् को बारे मा एक मानिस । ब्राजिलका नाटक स्पष्ट प्रस्ट यहाँ । यो देखिन्छ कि उनको मनपर्ने छ, वा उनको मनपर्ने राम्रो, सबैलाई बस चाहन्छ । ब्राजिलका — विशेष मामला छ । आफ्नो पत्नी को सबै भन्दा राम्रो मा सबै । र बिन्दु गर्न. तिनीहरूले प्रत्येक अन्य कल»मेरो प्रेम,»र यो धेरै छोइरहेको छ । जब मेरो पुरानो प्रोफेसर मिल्यो रिसाउनु र»भनेर भन्नुभयो आफ्नो राजकुमारी थिएन»खैर, म ग्रहण कि यो ठूलो- तर कुनै, म फेला कि बाहिर यो आफ्नो पत्नी थियो, जसलाई म थियो बस्थे लागि अधिक पचास वर्ष । कि सबै भन्दा राम्रो कुरा हुन सक्छ भयो उहाँलाई । यो मानिस मा थियो छोयो आफ्नो पत्नीहरू र छोराछोरीलाई अत्यन्त रूपमा, उहाँले थियो एक पटक स्पष्ट क्षेत्रहरुको बारेमा आफ्नो आमा । उहाँले वास्ता गर्ने एक महिला गर्छ राम्रो, कहिलेकाहीं तिनीहरूले पनि पतन पछि एक सानो आशा, तर यो लिन छैन दूर आफ्नो गुण । सामान्यतया मानिस दिन्छिन् र प्रदान लागि परिवार, तर अब यो छ धेरै फरक को मामला मा वृद्धि गतिशक्ति आन्दोलन, र म पछुतो मान्ने भनेर हेर्न को वर्ष र पछि अवधि हो राम्रो लागि आफ्नो कान्छो सहयोगिहरु । एक नियम को रूप मा, मिडिया मा र माथिल्लो अनुमति छैन सबै गृहकार्य छोराछोरीलाई या महिला गायब, त्यसैले दासी.
भने छैन, त्यसपछि तपाईं गर्न सक्छन् र भाँडा धुनु
आमाबाबुले धेरै मार्मिक, संवेदनशील र अक्सर धेरै मायालु. यहाँ यो मानिन्छ छ पूर्णतया सामान्य बाँच्न आफ्नो आमाबाबुले संग विवाह अघि वा विवाह अघि, अर्थात् वर्षसम्म पहिले यो । नागरिक विवाह छन्, साधारण छैन । तिनीहरूले सामान्यतया प्रत्येक अन्य थाह लागि एक धेरै लामो समय, सबै आमाबाबुको साथ बाँच्न र बन्न नियमित अतिथि मा मोटल, त्यसपछि विवाह र कदम मा तपाईं संग. र आइतवार जारी, भ्रमण गर्न मेरो आमाबाबुले, तिनीहरू कहाँ छन् द्वारा छानिएन को एक गुच्छा र. छोराछोरीलाई ब्राजील मा धेरै महंगा छन्, मुख्यतः किनभने लागत को शिक्षा. अब परिवार छोराछोरीलाई लागि, पहिले जस्तै, तर सबैले गर्न चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई र अत्यन्त गर्व को पहिलो गर्भवती पेट, र त्यसपछि शासकका. जस्तै टीवी श्रृंखला मा यी ठूलो परिवार छन्, आफ्नो कथाहरू संग गर्जनका, को रूप मा दृश्यहरु को एक श्रृंखला र कुनै कम आँधी. जब, लडाई, सम्झना कि प्रेम महत्त्वपूर्ण छ, र रूपमा लामो यो छ त, त्यहाँ छ भन्ने कुरामा कुनै शंका, त्यहाँ छ, सधैं को बास्ना न्यानो गले हावा मा, तिनीहरूले खेल्न साम्बा लय र एक उज्ज्वल सेतो मुस्कान सुने सकिन्छ हरेक कदम मा. भज गर्दा यस लेखमा लेखे, म म फेला कि बाहिर अगाडि बाथरूम विन्डो (मा ब्राजिलका घरमा कुनै ग्लास, कुनै काठ, कुनै फलाम बार्बिक्यु), एक उत्सुक थियो मलाई हेरिरहेका बेला म एक स्नान गरे. तुरुन्तै पछि यो सुनेर, मेरो बहिनीका पतिले क्रोधित भए र संगठित एक शिकार । मानौं कुनै एक सफल भएको थियो, तर म गम्भीर चढाएको. (ब्राजील मा, तपाईं गोली मार गर्न सक्छन् जो कोहीले आक्रमण निजी सम्पत्ति, पनि मा एक निर्माण साइट मा), तर म जस्तै, मलाई थाहा छैन, म मात्र कसरी थाहा राख्न अंकन घर वरिपरि, जो सीमित छ, र म साँच्चै मन पर्यो कि आइतबार यहाँ परिवार दिवस । यो समय तिनीहरूले खर्च संग आफ्नो परिवार ।
← पोर्चुगिज मानिसहरू लागि तिनीहरूले के गर्दै छन्. फोरम बारेमा पोर्चुगल:"जीवन मा पोर्चुगल"
अनलाइन डेटिङ मेक्सिको अनलाइन डेटिङ, मेक्सिको फोटो मजा मेक्सिको →